Huawei MateBook D 15 AMD Ryzen5(Space Grey) ~ ICT.com.mm
HomeHuawei MateBook D 15 AMD Ryzen5(Space Grey)
Operating System: Windows 10 Home Screen Size: 15.6 inches Screen Type: IPS Resolution: 1920 x 1080 Contrast Ratio: 800:1 Brightness: 250 nits Aspect Ratio: 16:9 Processor: AMD Ryzen53500U Memory: 8GB... [Learn more]
Brand: HuaweiSKU: 163487N/ASee more: Computer Systems, Huawei, Laptops / Notebooks, New Arrivals, Products, ShopFilter by: 15.6", 256GB SSD, 8GB RAM, AMD Integrated Graphics, AMD Ryzen 5, EDIT-ONE, Gray, Laptops (PC), USD, Windows 10 Home
Dimension (WHD): 357.8×229.9×16.9mm
Huawei မှ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဒီ Huawei MateBook D 15 က တစ်ကိုယ်ရည်သုံး/ရုံးသုံးအတွက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Business လုပ်ငန်းသုံး Laptop ကောင်း တစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ Huawei မှထုတ်လုပ်ထားပေမဲ့ OS ကိုတော့ Windows 10 Home နဲ့ပဲ အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင်က 15.6” အရွယ်အစားနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး Resolution က Full HD (1920x1080) ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။Full HD ဖြစ်တဲ့အပြင် IPS နည်းပညာလည်း ပါဝင်တဲ့အတွက် Laptop Display ကကြည်လင်ရုံသာမက အရောင်အသွေးကလည်း ပုံမှန် Full HD တွေထက် ပိုမိုစိုပြည်လှပပါတယ်။မြန်ဆန်သွက်လက်တဲ့ Computing စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဈေးနှုန်းချိုချိုသာသာနဲ့ ရရှိစေဖို့ Intel Core i5-8250U Processor နဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မတိမ်းမယိမ်းရှိတဲ့ AMD Ryzen53500U Processor ကို CPU အဖြစ် အသုံးပြုထားပါတယ်။ Memory ကိုတော့ DDR4 RAM 8GB ကို တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။အားကောင်းတဲ့ CPU နဲ့ RAM ကို အစွမ်းကုန်အသုံးချနိုင်ဖို့ 256GB SSD ကို ဒေတာ Storage အဖြစ် တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ Windows နဲ့ Software တွေကို လျင်မြန်သွက်လက်တဲ့ SSD ထဲမှာ Install လုပ်ထားပြီး သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။ စမတ်ကျကျ Login ဝင်ရောက်ဖို့ Fingerprint Sensor ကိုထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ဘတ္ထရီကတော့ 42Whr ဘတ္ထရီအမျိုးအစားကိုတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ USB-C port နဲ့ အားသွင်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အားဝင်မြန်ဆန်ပြီးနာရီဝက်အတွင်း 53% အထိ အားပြန်သွင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ပရီမီယမ်ကိုယ်ထည်ဒီဇိုင်းနဲ့ထုတ်လုပ်ပေးထားပြီး အထူ 16.9 mm အလေးချိန် 1.53 kg သာရှိတဲ့အတွက် တကယ့်ကိုပေါ့ပါးပါးလွှာတဲ့ Business Laptop တစ်လုံး ဖြစ်ပါတယ်။အာမခံတစ်နှစ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
Designed with portability in mind, the sleek metallic body laptop weighs just 1.53kg and hasathickness of 16.9mm2, so you can enjoy its immaculate FullView display wherever you are.
HUAWEI MateBook D 15 is powered by the AMD Ryzen53500U processor, which accelerates and enhances performance. Fitted withaPCIe SSD3, and packing up to 16GB in dual-channel architecture DDR4 RAM, its read and write speeds are blisteringly fast. With its Radeon Vega 8 Graphics, you can master daily work or enjoy entertainment with no effort.
HUAWEI MateBook D 15 comes witha65W USB-C charger5 that fits right in your pocket, so you can charge on the go. It can charge your laptop battery to 53% in just 30 minutes.6 Also it supports fast charging7 and data transfer for your phone.
This item: Huawei MateBook D 15 AMD Ryzen5(Space Grey) K877,922